INKULANA EMTHULU #2 eTerlingua Ghosttown - I-Airbnb
INKULANA EMTHULU #2 eTerlingua Ghosttown
Ikharaveni sinombuki zindwendwe onguDaniel
I-Yellow Submarine #2 yindlu ehonjiswe kakuhle nehlaziyiweyo ekwindawo yokungena eTerlingua Ghost Town. Uninzi lweendawo ezinomtsalane zikumgama wemizuzu eyi-5 xa uhamba ngeenyawo ibe indawo yokungena eBig Bend National Park ikumgama nje wemizuzu eyi-10 xa uhamba ngemoto. Khangela i-Electronic Ladyland, i-Yellow Submarine 1, kunye neZoo Airstream kwi-Airbnb ukuze ubhukishe indlu engasemva ekufutshane.
I-Yellow Submarine #2 likhaya elihle elinomtsalane! Ibhari yaphandle yindawo entle yokubukela ukutshona kwelanga kwiiNtaba zaseChisos, wonwabele ikomityi yekofu yasekuseni, okanye utye isidlo esimnandi sangokuhlwa. Kukho ibhedi etofotofo, i-futon enkulu kwindawo yokuhlala, igumbi lokuhlambela lalamaxesha kunye nekhitshi elinezinto ezisisiseko. Iveranda ehonjiswe ngemibala eqaqambileyo yaseMexico, ineebhedi ezimbini ezinde ezenza indawo yokuphumla etofotofo nesondeleyo. Indawo yokubasa kunye nendawo yokoja yegesi yeyakho ukuze uyonwabele!
4.74 · Izimvo eziyi-129
Sisekungeneni kwiTerlingua Ghosttown, kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kwiibhari ezininzi zasekuhlaleni, iivenkile zokutyela kunye neegalari zobugcisa. Kukwakho nevenkile yekofu, inkampani yokuthengisa, indawo yokuzonwabisa yangaphandle kunye neendawo zembali ezikwimayile enye.
Sithanda ukuncokola nabantu ngo-Airbnb kodwa ngokuqhelekileyo sikwigadi esesayithini okanye sisebenza kwiiprojekthi ezahlukeneyo. Ukuba kukho nantoni na oyifunayo, nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi😊